Ogaden News Agency (ONA) – Shaki kuma jiro inuu Cabdulaahi Xuseen u hiiliyay dadkiisa dulman
Shaki kuma jiro inuu Cabdulaahi Xuseen u hiiliyay dadkiisa dulman
Posted by ONA Admin	/ October 16, 2013
Waxaan shalay iyo maanta aad loo hadal hayay dalka Sweden dhibaatada ay ku hayso Itobiya dadka shacabka ah een waxba galabsan eek u nool Ogadenya ka dib markii habeen hoore laga daawaday STV1 filimkii Dokumentriga ahaa ee laga soo diyaariyay cajaladihii uu sida geesinimada leh uga soo saaray Cabdulaahi Xuseen qasnada Gacan-kudhiigle Cabdi Iley.
Saxaafadda ayaa aad u soo qaatay wixii lagu soo bandhigay filimka iyagoo wareysiyo isdaba joog ah la yeeshay Cabdulaahi Xuseen iyo labadii wariye ee xabsiga Itobiya ku xidhnaa ilaa uu ka dhintay Meles Zanawi oo hubaal ay tahay inuu wax ka ogaa dambi beenaadka lagu soo oogay labada wariye maadaama uu ahaa aabaha dhabta ah ee Cabdi iley uu ka tala qaadan jiray. Wargeyska caanka ah ee Aftonbladet oo Cabdulaahi Xuseen wareystay ayaa yidhi; waxyaabaha uu soo bandhigay filimka waa qayb yar oo ka mid ah dambiyada ka dhacay Ogadenya. Markaan arintaa kala hadlay Cabdi Iley wuu igu qoslay ayuu yidhi Cabdulaahi, markaa ayaanan ogaaday buu yidhi inuu masuul ka yahay isaga waxa ka dhacaya dalka oo amrkiisa lagu fulinayo. (- It was when I brought it up with the president , and he did not do anything but smile, and I knew he was one of those who were behind this , that I decided to switch sides , says Abdullahi Hussein told Aftonbladet .)
Waxay isku raaceen wargaysayada ka soo baxa dalkaa in dambiyada laga galay shacabka Somalida Ogadenya ee cadaymahooda la hayo la horkeeni karo maxkamadda iyadoo uu noo sheegay mar aan teleefoon ku wareysanay mudane Cabdulaahi Xuseen inuu ku wareejinayo 100 saacadood oo filimaan ah xafiiska Xeerilaaliyaha Qaranka ee Dambiyada Dawliga ah (the International Public Prosecution Office in Stockholm ).
Wuxuu noo sheegay Cabdulaahi Xuseen in malaayiintii daawatay Filimka oo waqti xasaasi ah (Prime Time) la soo daayay ay isweydiinayaan sababta ay xukuumadda Sweden xidhiidhka ula leedahay dawlad xasuuq iyo gaboodfal ku haysa dad shacab ah oy leedahay masuul ayaan ka nahay. Wuxuu intaa raaciyay Cabdulaahi inay qareenada ugu caansan dalka Sweden uu midwalba goonidiisa ula soo xidhiidhay iyagoo codsanaya inay la wareegaan qadiyadda oy maxkamadda horgeeyaan. Ugu dambayntiina waxaa qadiyadda la wareegay Qareen Stellan Gärde oo dambiyada noocan ah ku takhasusay oo dalka Sweden caan ka ah.
Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah TV-ga Itobiya ee Jigjiga laga daawado oo mar kale filimkii ay horey ugu fashilmeen ku soo caliyay taasoo kaga cadhaysiisay qaar ka mid ah siyaasiyiin Swedish ah oo markii hore ku difaacayay Itobiya in aanay shaqa ku lahayn filimkii labada wariye laga sameeyay ee maxkamadda lagu saaray. Filimka ay hadda soo daayeen ESTV oo waliba Cabdulaahi Itobiya uu ka dhex muuqdo isagoo aflabadii ku qirnayo inuu isaga ahaa ninkii maraanmaray labada wariye saxna uu ku ahaa arintaa ayay dadka sida fiican ula socda arimaha Jigjiga aqoontana u leh hab-dhaqanka Cabdi iley, waxay leeyihiin waa qorshe uu Cabdi iley dajiyay uguna talagay inuu uga siibto Cabdulaahi Itobiya qadiyadaa oo isaga dusha laga saaro, hadii dawladda Itobiya ama maxkmadaha caalamka laga dalbado qofkii masuulka ka ahaa.
Mr. Andrew Rocksén oo ah ninka Filimka isku dubariday ayaa yidhi waxyaaba la yaab leh oo murugo kugu abuuraya ayaan ka daawaday 9kii bilood een ku hawlanaa filimkan taasoo ku tusaysa mujrimiin gacan-ku-dhiiglayaal ah inay galeen dambiyada halkaa ka dhacay, waxaanan rajaynayaa inay markhaati cad oo maxkamadaha la horkeeni karo uu noqdo filamkaa.
Ugu dambayntii, wuxuu noo sheegay Cabdulaahi Xuseen inuu bilaabi doono goor aan fogayn qaybtii 2aad ee filimadan oon ugu talagalnay dadka u dhashay dalka Ogadenya say u arkaan dambiyada iyo gaboodfalka qaawan ee lagu hayo shacabka iyo beenta loo shaaegayo maalinwalba ee la leeyahay nabad iyo horumar ayaa ka socda Ogadenya.
Qayb ka mid ah Filimka
Nin macawis garabka ku wata soow ceeb kama ahaan jirin dalkeena. Ma dhaqan Tikreebaa arrintan oo waa la isu ekeysiinayaa Tikreega?
Macawis gurigaa lagu joogaa ama waa la xidhaa ee garabka laguma qaato.
free ogadenia illahy ayaa arka dhiba ogadenia lagu ahyo allaw adaa arka free ogadenia